U-Anja Schaap waseKatwijk ngoLwesihlanu ozayo kwinqutyana yangasese "wangcwatywa": uMartin Vrijland
Ndixolisa, kodwa ngokuqinisekileyo kufuneka uxele uhulumeni waseDatshi ukuba awuphelise ngokugqithiseleyo imbambano, nokuba mhlawumbi siyadlala kunye nemisebenzi yengqondo (PsyOps) njenge-Anja Schaap okanye u-Anne Faber. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza kubonakala ngathi kungabonakali, ngenxa yokuba i-state, ngokubambisana neendaba kunye nezobukhosi, ibeka i-PsyOp kunye nokudala ubungqina bobuxoki, ngoko ke ubungqina obufunekayo ukuba bungenakulungiswa ukuba i-PsyOp ingadalwa. Kwaye ukuba i-judiciary isele ikopela, ngoko-ke ityala liya kubangela nto.
Cinga ucinge ukucela uvavanyo lwe-DNA ukubonisa ubungqina kunye nosapho olusithiwa. Emva koko iphrofayli ye-DNA inokuveliswa yikhomputha kwaye iifayile ezifunayo zeDNA zingenziwa ngokufanelekileyo. Ezingenanto. Sekunjalo uyazibuza ukuba, umzekelo, intsapho kaAnja Schaap ikhona xa ukhona esi sililo sikhangiso kuphela ukubona amagama okuqala.
Vula isifuba kwaye ube ne-ejensi ozimele kwindawo leyo uthatha uvavanyo lwe-DNA uze wenze okufanayo kunye nosapho osolwayo? Andiyithandi nto ngaphandle kokuqinisekisa ngokuqinisekileyo okanye ukungavumelekanga imbono yam yokusebenza kwengqondo. Emva kwakho konke, unguye u-bogeyman ukuba uthumela olu hlobo lobhaliweyo kwi-Facebook:
Umfazi oneminyaka eyi-33 ubudala ulahleka kwiiveki kwaye abeendaba bakhuthaza i-app yeSherlock Holmes xa sele kwenzeka ukuba iphepha lakhe le-Facebook lizaliswe ngeSherlock Holmes (kuquka idilesi yasekhaya). Wayeza kuba kwi-cafe kunye nosapho (kodwa ngokukhawuleza kuphela indoda ye-1 kwisikrini). Emva koko ucinga ukuba uhamba ubusuku bonke kwaye kuthiwa ufumane iiveki ze-3 kamva elwandle ngumdlali wesigxina saseJamani. Imbali yokuthumela kuphela iphela akukho mkhombe waseJamani yibona ukuba (ngasentla) i-Schiermonnikoog 3 ihleli kwieyure. Kwaye kuyinyaniso kangakanani ukuba umzimba uhamba apha? Umyalezo onjalo uza kufuneka wabelane ngezihlandlo ze-17 izigidi kunye neentengiso zeentengiso ze-psyop kufuneka zibheke kwii-studios zazo. Nangona kunjalo, nje ngokuba uMartin Vrijland kunye neTelegraaf okanye i-NOS ibonisa oku, wonke umntu uyahlula ngokwaneleyo. Kungakhathaliseki ukuba kubonakala njani ... abezindaba bahlala bethembekile kwaye uMartin Vrijland uza kunye neengxoxo. Okanye ngaba mhlawumbi ngenye indlela? Kufuneka kucace kangakanani ukuyibona? Kwaye wonke umntu onokwabelana ngento enje, umkhosi we-troll uvela ngezimvo ezinjenge "kuza kumngcwabo", "Ndiyamazi", "shiya intsapho yedwa" njalo njalo.
Ngoko ke ndingathanda ukuba ndibe nethuba lokuluhlula ngaphandle. Emva koko wonke umntu ulahlekile loo nto engabonakaliyo ebomini (uMartin Vrijland) okanye wonke umntu ekugqibeleni uyafumanisa ukuba urhulumente kunye nabeendaba baqhatha ngobuqhetseba nokukhohlisa. Lo mva mhlawumbi awuyiyo injongo.
"Kodwa u-Goddamn Freeland! Uyabona iifoto zangempela zikaAnja nodadewabo uJacolien!Hayi, ndibona iifoto. Namhlanje awukwazi ukusho ngokuqinisekileyo ukuba iifoto zivela kubantu bangempela. Oku kusebenza nakwiifilimu, iifilimu ezidlulileyo, iifoto ezidlulileyo, ukurekhodwa kweekhamera zokhuseleko kunye njalo njalo njalo. Kutheni? Ngenxa yokuba abavelisi beTV bafumana izibonelelo ixesha elide ukuvelisa okubizwa ngokuba yi-depthfakes. "UEwe, kodwa kwakukho abantu ababemazi!"Awaziyo loo nto. Uthetha kumajelo asekuhlaleni okanye kwezinye iimeko abalinganiswa abathi banolwazi oluphambili. Ezi ngxelo zentlalo yeendaba zentlalo zinokuthi zenziwe lula ngokukodwa ngamashishini axhomekeke ekukhankeni iiprofayili kwaye 'abo bantu bokwenene' bangaba yi-Inoffizieller Mitarbeiter 'abalapha nalapha bekulungele ukugubungela ibali. Akukho nto ibonakalayo. Funda eli nqaku ukufumanisa indlela elula ngayo.
Into kuphela ongayiqwalasela kukuba ngokukhawuleza ukuba amajelo aseburhulumenteni ahlawule ingqwalasela eninzi kwinto ethile, emva kokuba impendulo ekhuthazweyo ebantwini, imigaqo emitsha iqheleke ukuba ingazange yamkelwe ngaphandle kwesi siganeko. Kwimeko ka-Anja Schaap kubonakala kunzima ukuba sisebenzelana ne-PsyOp ukuba abantu baphenduke kwi-Pokémon Hambani nabazingeli, kodwa ke umntu wabo. Kufuneka sikhuphe i-app ye-Sherlock Holmes ngokubanzi ukutshutshisa umntu oba ngumdlalo we-Pokémon-kwaye ucinga ukuba unobangela obuhle (ngokuba uAnja Schaap, Anne Faber, kunye nazo zonke ezinye izinto ezilahlekileyo). Kwixesha elizayo elisondeleyo, urhulumente unokuthatha ngokulula umntu obalekela ulawulo lwarhulumente wamapolisa, kwaye ngexesha elifanayo uphulaphule ngokusemthethweni (kwaye ubukele) zonke ezo fowuni ezifake loo app.
Yintoni enye ndiyibuzayo? Ngoko i-NFI okanye i-Anass Aouragh edumileyo (PsyOp?) I-pathologist uFrank van de Goot sele sele yakwazi ukwenza umzenzelo? Ingobangela yokufa sele sele imisiwe? Ewe, loo nto yayisisuswe xa uFran van de Goot kwi-AD Wathi umzimba wawusesimweni sokubola kakhulu kwaye mhlawumbi yayonakaliswe zizidalwa zonke eziphilayo elwandle. Kodwa oko kuhamba njani nomngcwabo uvaliwe ngoLwesihlanu ozayo? Yaye yintoni eyasala kunye noodade u-Anja (nguJacolien) ukuba unako ukutshabalalisa? Ngaba i-Madum Tussaud iyafana ne-dummy ifakwe kwibhokisi ngoba kungenjalo kuya kuqala ukuvumba kakhulu kwicawa? Uxolo ngenxa yam yokungathembeki, kodwa andiyikholelwa eli bali kwikho konke de kubekho ubungqina obukhuni. Kodwa sinokugubha loo nto, kuba ngubani na onokwazi ukujonga ukuba ngubani "ubungqina" benyaniso?
U-Anja ubuyele eKatwijk. Ukhethile isifuba sakhe kunye nomfanekiso omhle we-Anja. Ngamhla wamvakashela. Unreal udadewethu othandekayo kunye nomhlobo. Yintoni ndiya kukukhumbula?
Ndibona abahlanu behamba phakathi. Izilwanyana ezilungileyo pic.twitter.com/BCAwEqWv50
Uludwe lwekhonkco lovimba: omroepwest.nl, ad.nl
U-Anja Schaap unokubona imifanekiso kwi 'Uphando luceliwe' kwaye ngoko akukho PsyOp?
U-Anja Schaap ufumene efile elwandle ngaphezu kweeWadden Islands, kodwa yiyiphi iinqanawa (myshiptracking.com)?
tags: Anja, umngcwabo, kungcwatywa, le, bangela ukufa, eziziimbalasane, Frank, Gutter, Holmes, ukuchithwa, sebenza, se pathologist, yengqondo, psyop, Iigusha, USherlock, van
24 Juni 2019 kwi-13: 53
Qaphela: ukuba kungenzeka ukuba u-Anja Schaap ukhona.
Emva koko kusenokuba kusebenza (kumxholo we-PsyOp).
Ibali linokuthi liyinyaniso, kodwa ingongoma yam kukuba ibuye ibuye yonke impawu ye-PsyOp enokwenzeka.
24 Juni 2019 kwi-16: 59
Dear Martin, uphinde uphinde uphinde ulahleke ... amapolisa athi loo Mthetho iValiwe.
"Ngokwamapolisa, kunokwenzeka ukuba umzimba uya kutshitshisa amanzi eKhuwijk kwaye, ngenxa yemigudu, iphelela ngasentla kwisiqithi saseMpumalanga."
"Abasebenzi beenqanawa zaseJamani bahlangana nomzimba ka-Anja ngethuba."
24 Juni 2019 kwi-21: 49
UMartin, uzonandipha. Kwaye unelungelo lokungabaza malunga 'neengxelo' ezivezwe nguRhulumente. Ilungelo lokungabaza, ukungathandabuzeki, lifanele kwaye lihambelane noluntu oluqhelekileyo lukhululekile. Ngelishwa, le nto ayiyiyo imeko kwaye iza kuqondiswa.
Ewe, abafana abasuka kwiskripthi abathandanga ilungelo lokungabaza. Oko akufanelanga uHen. Aba bafana bafuna kwaye bafuna ukuxhomekeka kwi-'ibakala 'kunye nokuzimela ngokuchazwa' kweengxelo '.
25 Juni 2019 kwi-16: 05
hahaha BNR ngokwayo inxalenye yeengxaki zeendaba ezikhohlisayo, i-fakers ... 😛
26 Juni 2019 kwi-00: 30
I-BNR i-Beeldbepaler ibizwa ngokuba yiprogram. Ngoko ke banquma umfanekiso wakho; yakho imbono yehlabathi
27 Juni 2019 kwi-22: 43
Katwijkers kuni bonke
Ukuba, njengomhleli wephephandaba, uthetha nge-condolence
umhlobo osanda kutshatyalaliswa ngoko uyazi ukuba uyawela yonke imida yenceba. (i-surplus isetyenziselwa ukusetyenziswa kodwa ngoku kungenjalo uvelwano)
Okanye uyazi ukuba akuyi kubakho nxamnye nantoni na ngenxa yokuba akukho nabathandekayo, ngubani oya kuthi? Asikwazi nje
Kwakukho indawo ehlotshiswe ngokukhethekileyo yenkcazelo ngexesha loxolo? Lindela !!! Kutheni bekungekho inkomfa yenkomfa kwangaphambili malunga nokufunyanwa komntu olahlekileyo, kuba inkcenkceshela yachaza ukuba mhlawumbi ityala. Abantu abangama-17million bahamba ngokungahambiyo kunye nebali elipheleleyo kwaye banelungelo elipheleleyo lokwenza ubala, ukuchazwa kumaphephandaba / amandla / amapolisa.
Kutheni umthetheli engazange avele kwinkomfa yenkomfa. kutheni kwakungekho nkomfa yenkomfa kuzo zonke emva kokugqithiswa okukhulu kuyo yonke imidiya (ukusika kunye nokudibanisa iiforamu). Kutheni igama lomkhumbi / isikhephe engaziwa? Kutheni kungekho mifanekiso yogada lonxweme / yamapolisa kunye okanye i-marrechaussee ekudlulisweni? Kutheni kuthethwa nguPeter R de Vries ukuba u-Anja uye wazibulala. Ukuba u-Anja wayengenasiphelo sengqondo, kutheni abemi beendaba babengabhala ngaye?
Kutheni uluntu lugcinwa ngokungathandabuzeki malunga neqela lentsapho okanye ilungu lentsapho eBlauwen Bock emva kwendibano yokugqibela, okokuqala kwaziswa ukuba yayisiselo lwentsapho kwaye "umntu" osentsapho wathi: thatha iteksi.
Kwaye ke kukho imininzi yemibuzo eyenza ukuba umcimbi wonke uphonseke ngokungathandabuzeki njengebali elingamanga, phi iintatheli eziye zafika neefoto zekhephe kunye nabasebenzi ababenokuthi bafumane u-Anja.
Okanye ngaba akukho zinyatheli zeendaba kwaye konke kunqunywe kwaye kunamathela? U-Katwijkers akathandabuzi ukubuza imibuzo.
Nguwe kuphela isithethi samapolisa (uDick Goijert) kunye nomakrofoni uye walethe ibali kwi-17 yabantu abayizigidi, kufuneka sikholwe ukuba njengomfundisi
Apha ibali likaDick Goijert elivela kumapolisa
umshanelo wabhala wathi:
28 Juni 2019 kwi-08: 21
Kwi-akhawunti ye-twitter kaJacolen Schaap kubonakala ukuba uJacolien uyakhathazeka kakhulu ngeengxelo zikaTyerry Baudet, nangona ngexesha lokulahleka lika-Anja. Ukwabelana ngeengxelo ezininzi malunga nokulwa nobuYuda.
« AmaDatshi ayengazi imeko abayiyo: ukuhlolwa kwejele laseStanford
I-Deepfakes yintoni na kwaye yinto ede kangakanani? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 16.122.954
ECanada: UTshayina uGqr. I-Xiangguo Qiu kunye neWuhan yintsholongwane yokulwa imfazwe ukuze iChina ixhomekeke kwiChina kwisisombululo
Cubungula op I-coronavirus evela eTshayina ibonelela nge-alibi efanelekileyo kwisibophelelo sokugonya kwihlabathi
SalmonInClick op ILibya ibonelela ngokucacileyo malunga namazwe aseYurophu ukuba angowokuqala ukuthathwa yiTurkey
SandinG op ECanada: UTshayina uGqr. I-Xiangguo Qiu kunye neWuhan yintsholongwane yokulwa imfazwe ukuze iChina ixhomekeke kwiChina kwisisombululo
UMartin Vrijland op ECanada: UTshayina uGqr. I-Xiangguo Qiu kunye neWuhan yintsholongwane yokulwa imfazwe ukuze iChina ixhomekeke kwiChina kwisisombululo